၁၆.၃ Stability of damaged ships :: Marine Knowledge
ရေကြောင်းပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ရေကြောင်းပညာရပ်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူများ၊ ရေကြောင်းပညာရပ်ကို သင်ကြားနေသူများအား ရည်ရွယ်၍ ဤဆိုဒ်ကို ဖန်တီးပါသည်။ အများစုမှာ ဘာသာပြန် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လိုအပ်ချက်များရှိပါက သည်းခံ၍ ဖတ်ပေးကြပါရန်။ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့လိုပါက marine.knowledges@gmail.com ကို လိပ်မူပြီး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၁၆.၃ Stability of damaged ships
Permeability ဆိုသည်မှာ သင်္ဘောတစ်စီးတွင်ရှိသော ရေလုံခန်းတစ်ခုတွင် အများဆုံးရေ၀င်နိုင်သော ပမာဏကို ဆိုလိုသည်။ Stability တွက်ချက်ရာတွင် ၀င်လာသောရေ၏ ပမာဏပေါ်မူတည်၍ Permeability ကို သုည သို့မဟုတ် ၁ ဟု သတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ အဆိုပါရေလုံခန်းကို ရေလုံးဝ မ၀င်သော အခြေအနေ သို့ အခန်းလွတ်ဟု ယူဆပါက Permeability ကို ၁ ဟုသတ်မှတ်သည်။ ခန်းလုံးပြည့်ရေပြည့်နေသောအခြေအနေကို Permeability တန်ဖိုး သုည ဟု ယူဆသည်။ သင်္ဘောတစ်စီးရှိ အင်ဂျင်ခန်းတစ်ခုအတွက် Permeability၏ တန်ဖိုးကို ကို ယေဘုယအားဖြင့် 0.85 ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါ အင်ဂျင်ခန်းအတွင်းသို့ ရေ သို့မဟုတ် အခြားသော အရည် 0.15% အထိဝင်ရောက်သော်လည်း ထိုသင်္ဘော၏ Buoyance သည် လုံလောက်နေသေးပြီး မနစ်မြုတ်နိုင်သေးဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် Permeability တန်ဖိုးများပြားသော အခန်းများသည် ထိခိုက်မှု့များကြောင့် ရေယိုစိမ့်မှု့များစွာဖြစ်ပေါ်သော်လည်း Stabitily ကို ထိန်းထားနိုင်သည်။ Permeability ကိန်းညွှန်းတစ်ခု ဖြစ်သော permissible length နှင့် ပတ်သတ်သည့် Freeboard အကြောင်း၊ ပလင်းဆိုး (Plimsoll) mark အကြောင်းကို Load Line အခန်းတွင် ဖော်ပြသွားပါမည်။
Posted by Aung Htut at 2:57 AM
အခန်း ၁၆ - Stability
အခန်း ၁၄ - Maintenance and docking
အခန်း ၁၅ - Safety
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်္ဘောကို ခွက်ပုံစံရေပေါ်ပေါ်နေသော အရာတစ်ခုဟု ယူဆကြည့်ပါ။ လည်းကောင်းသင်္ဘောတွင် အလျှားလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ဒေါင်လို...
၁၆.၂ Intact Stability
သင်္ဘောတစ်စီးကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျှင် ရေပေါ်တွင် တည့်မတ်စွာ (၉၀ ဒီဂရီ တည့်မတ်စွာ) တည်နေရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ထို့ကြောင့် သင့် Hull F...
၁၈၀၀ ပြည့် အစောပိုင်းကာလများတွင် သင်္ဘောများကို သစ်သားနှင့်တည်ဆောက်ရာမှ အခြားသော ပစွည်းများနှင့် ရောစပ်တည်ထွင်ပြီး တည်ဆောက...
ဤအခန်းသည် သင်္ဘောဆေး အမျိုးစားများ၊ သင်္ဘောဆေးမသုတ်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု့များ၊ သင်္ဘောဆေးသုတ်နည်းစနစ်များ၊ သံချေးတက်ပုံမှ ကာကွယ်သော ပ...
သင်္ဘောတစ်စီးဟာ လေးလံသော သံကဲ့သို့ သတ္တုနှင့် တည်ဆောက်ထားသော်လည်း ဘာဖြစ်လို့ ရေပေါ်မှာ ပေါ်နိုင်ပါသလဲ? အကြောင်းအရင်းမှာ သင်္ဘောကို အေ...
Maintenance and Docking ၁၄.၁ Construction materials for ships ၁၄.၁.၁ Wood ၁၄.၁.၂ Steel ၁၄.၁.၃ Aluminium and its alloys ၁၄.၁.၄ Copper and i...
၁၄.၃.၂ Conventional Paint
အလွန်ရှေးကျသော သင်္ဘောဆီဆေးများကို လျှော်စေ့ တစ်မျိုးမှ ရရှိလာသော အဆီနှင့် တာပင်တိုင်ကို ရောစပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ နောက်ပို...
ယခု အခန်းတွင် သံချေးတက်ခြင်း ၊ သံချေးတက်ပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပုံ တို့ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။
သင်္ဘောဆေး သုတ်ရာတွင် ကောင်းမွန်သော သင်္ဘောဆေးအဖြစ်ရရှိရန် အဓိက အချက်မှာ ဆေးသုတ်မည့် အောက်ခံ သတ္တုကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း (Pre-tr...
၁၄.၁.၄ Copper and its alloys
ကြေးဝါ (Brass) ကြေးဝါသည် တည်ငြိမ်မှု့(nobel) အတန်အသင့်ရှိသောကြေးနီနှင့် သွပ် ရောစပ်ထားသော သတ္တုဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေနှင့် ထိတွေ့ပါက သွပ်...
Spin palace Counter everestpoker ETORO online casino
© 2010 ~ Marine Knowledge ~ E-commerce made minimal by Irsah inDesigns. | BACK TO TOP